बडादशैंको टीका लगाउँदा लगाइदिने र लगाइमाग्ने कता फर्किने ? Nepalpatra बडादशैंको टीका लगाउँदा लगाइदिने र लगाइमाग्ने कता फर्किने ?
बडादशैंको टीका लगाउँदा लगाइदिने र लगाइमाग्ने कता फर्किने ?
विजयादशमीका दिन आफ्ना मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्दा अरू फूलको सट्टा समृद्धिको प्रतीक पहँेलो जमरा नै प्रयोग गरिन्छ । घटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा आज नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा लगाइन्छ । घटस्थापना गरिएको पूर्ण कलशबाट अभिषेक गरी नवदुर्गाको प्रसादस्वरुप रातो टीका र जमरा लगाउने वैदिक सनातनी परम्परा छ ।
केही जाति र सम्प्रदाय विशेषले भने आज सेतो अक्षताको टीका लगाएर पनि विजयादशमी पर्व मनाउँछन् । औषधीय गुणले युक्त जौको जमराले १०० भन्दा बढी रोग निको हुने आयुर्वेद चिकित्सक डा. शेषराज आचार्य बताए ।
यस्तो छ बडादशैंमा पुरुषका लागि पढिने मन्त्र :
आयू द्रोण सुते, श्रृयं दशरथे शत्रुक्षयं राधवे,
यस्तो छ बडादशैंमा महिलाका लागि पढिने मन्त्र :
#कता फर्किने ?
#लगाइदिने र लगाइमाग्ने